Lesona 3 : Ny antson’Andriamanitra
Hodinihina mandritra ny herinandro: Ezra 7:10; Dan. 9:24–27; Dan. 8:14,26,27; Rôm. 8:28,29; Eks. 3; 4.
Tsianjery: « Isaorana anie Jehôvah, Andriamanitry ny razantsika, Izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka hahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah any Jerosalema» - Ezra 7:27.
Catégorie : Lesona 3 : Ny antson’Andriamanitra
Misy asa manokana ve nanendren’Andriamanitra ny isam-batan’olona? Misy fepetra ve izay mahatonga ny olona iray ho mahomby kokoa amin’ny asa iray manokana noho ny olona iray hafa? Samy hafa ve ny fahitan’Andriamanitra sy ny fahitantsika ireo fepetra ireo? Hamaly hoe eny amin’ireo fanontaniana ireo ny ankamaroantsika. Mino isika fa misy fotoana anomanan’Andriamanitra antsika ho amin’ny andraikitra miavaka, amin’ny alalan’ny fanabeazana sy ny fanandramana. Misy fotoana koa anefa izay ifidianany antsika mba hanompo noho ny fahavononantsika sy ny fanetren-tenantsika fotsiny. Tsy mora mandrakariva ny mahafantatra ny drafitr’Andriamanitra ho an’ny fiainantsika, sa tsy izany? Na izany aza, feno tantaran’olona nantsoin’Andriamanitra ho amin’ny andraikitra manokana ny Baiboly.
Mahaliana tokoa fa nantsoin’Andriamanitra ho amin’ny andraikitra miavaka i Ezra sy Nehemia: hanangana indray ny tanàna sy ny tempoly efa rava. Asa tena goavana izany! Asa maro samy hafa anefa no takin’ilay fananganana eto. Nasain’Andriamanitra nitarika ny vahoakan’ny Isiraely hiverina any Jerosalema ka hanangana indray ny tempoly sy ny tanàna izy roalahy ireo. Etsy an-kilan’izany, tian’Andriamanitra hampianatra ny olona ny momba Azy koa izy ireo. Ary ambonin’izany rehetra izany, tian’Andriamanitra izy ireo hanampy ny olona hanana fifandraisana feno fanoloran-tena Aminy indray. Tena nomen’Andriamanitra asa goavana maro tokoa i Ezra sy i Nehemia!
Ny fiantsoana an’i Ezra sy i Nehemia (Ezra 7:10)
Azontsika lazaina fa nifidy an’i Ezra mba hanompo Azy noho ny antony maro Andriamanitra. (1) Vonona ny hanao izay rehetra angatahin’Andriamanitra izy. (2) Mpitarika izy ary (3) mpanora-dalàna sy mpampianatra tena mahay. Misy antony hafa mety ho hitantsika koa. Misy andininy iray ao amin’ny Baiboly anefa izay angamba manaporofo indrindra ny antony nanomezan’Andriamanitra azy io andraikitra manokana io.
Inona no ambaran’ny Ezra 7:10 amintsika momba an’i Ezra? Milaza ny Baiboly fa “nampiomana ny fony hitady ny làlan'i Jehovah ka hankatò izany” i Ezra. Ahoana no mety nanaovany izany?
Ny voambolana nadika hoe “nampiomana” dia kun amin’ny teny hebreo. Azo adika hoe “vonona, nanomana, hentitra, mampiorim-paka, tsy mihozongozona” izany. Noho izany, ny tena hevitr’io fanambarana ao amin’ny Ezra 7:10 io dia fanomanana ny fony tamin’ny fomba hentitra na nampiorim-paka ny fony mba hitady an’Andriamanitra i Ezra.
Taorian’ny nahatongavany tany Jerosalema, dia nasehon’i Ezra ny hevitry ny hoe manolo-tena ho an’Andriamanitra, ka nampianatra ny Tenin’Andriamanitra tao Jerosalema izy nandritra ny telo ambin’ny folo taona. Mety toa tsy nampiova zavatra ny fahitany ny asany nandritra ireo telo ambin’ny folo taona ireo. Rehefa vita anefa ny fananganana ny mandan’ny tanàna, dia niantso fivoriana ny vahoaka – tsy hoe satria nisy olona nanery azy ireo, fa satria naniry ny hanao izany izy ireo. Nanao izany izy ireo satria niorim-paka ny Tenin’Andriamanitra izay nampianarin’i Ezra azy.
Nahoana no nifidy an’i Nehemia Andriamanitra? Vakio ny Neh. 1:1– 11.
Niraiki-po tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona i Nehemia. Nalahelo izy rehefa fantany fa nitsahatra ny asa tany Jerosalema. Nanana fitiavana niredareda ny asan’Andriamanitra izy, ka nirotsaka an-tsitrapo nanao ny asa, tahaka an’i Ezra ihany. Namaly ny vavaka sy ny hetahetan’izy ireo Andriamanitra. Indraindray dia misy hevitra hafahafa tonga ao an-tsaintsika. Mihevitra isika fa raha misy zavatra tiantsika dia tsy ho avy amin’Andriamanitra mihitsy izany, satria heverintsika fa asa sarotra izay mety tsy tiantsika atao ihany no homen’Andriamanitra antsika. Tsy marina anefa izany! Matetika tokoa Andriamanitra no mampanao antsika zavatra tiantsika. Tiany isika hanana fitiavana miredareda ny zavatra ataontsika ho Azy!
Tamin’ny fomba ahoana no nahatsapanao ny maha-zava-misy ny fiantsoan’Andriamanitra anao mba hanao zavatra izay tianao ho Azy?
Amin’ny fotoana mety (Dan. 9:24–27)
Tao amin’ny lesona voalohany isika dia nianatra momba ny fiantsoan’Andriamanitra an’i Zerobabela (teo ho eo amin’ny 538 TlK) sy Ezra (457 TlK) mba hanao asa fanompoana manokana. Ny fiantsoan’Andriamanitra an’i Nehemia (444 TlK) kosa no nodinihintsika tao amin’ny lesona faharoa. Ilaintsika ny mahatakatra fa niantso ireo lehilahy ireo noho ny antony manokana Andriamanitra. Nahoana? Satria tonga ny fotoana anatanterahan’Andriamanitra ny teny fikasana nomeny ny olony taona maro lasa izay. Koa nifidy ireo lehilahy telo ireo Andriamanitra mba hanampy Azy. Ohatra: nanetsika an’i Zerobabela Izy mba hanao asa manokana tany amin’ny fiafaran’ny fitopolo taona naha-babo ny Isiraely tany Babilôna. I Jeremia no naminany momba io fampanantenan’Andriamanitra ny hanafaka ny olony aorian’ny fitopolo taona io.
Tamin’ny taona fahafiry no niantsoan’Andriamanitra an’i Ezra ho amin’ny asa fanompoana? Tamin’ny taona izay namoahan’ny mpanjaka Artaksersesy didy ihany. Nahoana no zava-dehibe eo amin’ny faminanian’ny Baiboly io taona io? Vakio ny Dan. 9:24–27.
Nilaza tamin’i Daniela ilay anjely hoe: “Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny hivoahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana an'i Jerosalema ka hatramin'i Mesia Andriana dia ho fito herinandro sy roa amby enim-polo herinandro” - Dan. 9:25.
Voaresaka eo amin’ny and. 27 ny herinandro farany amin’io faminaniana ara-potoana io. Fantatsika fa misy fito andro ao anatin’ny herinandro. Misy fitsipika ara-Baiboly manokana ao amin’ny Nom. 14:34 sy Ezek. 4:5,6, izay milaza fa fanoharana ihany ny “andro” ao amin’ny faminaniana ara-potoana. Midika ho herintaona ara-bakiteny ny iray andro eo amin’ny faminaniana ara-potoana ao amin’ny Baiboly. Koa ny herinandro na fito andro izany dia midika ho fito taona ara-bakiteny eo amin’ny faminaniana ara-potoana. Miresaka momba ny fitopolo herinandro io faminaniana ao amin’ny Dan. 9:25 io. Koa raha mampiasa ny fitsipika ara-Baiboly momba ny faminaniana ara-potoana isika, dia hitantsika fa miresaka momba ny 490 taona ara-bakiteny io andininy io.
Oviana anefa no nanomboka ireo fitopolo herinandro na 490 taona ara-bakiteny ireo? Ambaran’ny Dan. 9:25 fa nanomboka tamin’ny fotoana namoahan’ny mpanjaka didy hanamboarana indray an’i Jerosalema izany. Mpanjaka telo anefa no namoaka didy mifandraika amin’izany: i Kyrosy, i Dariosy, ary i Artaksersesy. I Artaksersesy ihany anefa no mpanjaka nandidy ny Jiosy hanangana indray ny tanànany, ary ny didy navoakany ihany no nampiraisina tamin’ny fiderana an’Andriamanitra noho ny fidirany an-tsehatra (Ezra 7:27,28). Tamin’ny taona 457 TlK izy no namoaka izany didy izany, izany hoe tamin’ny fahafito taona nanjakany, ka manomboka eo no anisantsika ny fitopolo herinandro ara-paminaniana (vakio ny Ezra 7:7–26.)
Ireo 70 herinandro sy ireo 2300 andro (Dan. 8:14,26,27)
Jereo ny Dan. 9:24: "Fitopolo herinandro no voatendry ho an'ny firenenao". Ny voambolana nadika hoe "voatendry" dia midika ara-bakiteny hoe: "nesorina". Tsy ampiasaina ao amin'ny Baiboly afa-tsy ao amin'io andininy io izany voambolana izany, saingy hita ao amin'ny asasoratra jiosy hafa izany, ary midika hoe "manaisotra" ampahany avy amin'ny zavatra iray lava kokoa. Koa manampy antsika izany hahatakatra fa ireo fitopolo herinandro na 490 andro ara-bakiteny dia tsy maintsy "esorina" avy amin'ny fotoana ara-paminaniana hafa sy lava kokoa ao amin'ny Baiboly. Aiza anefa no ahitantsika io fotoana ara-paminaniana lava kokoa io? Ao amin'ny Dan. 8 no amakiantsika ny momba ny 2300 andro ara-paminaniana, izay 2300 taona ara-bakiteny koa.
Vakio ny fahitana azon'i Daniela ao amin'ny Dan. 8. Inona no ampahany ao amin'io fahitana io izay tsy nohazavaina? (Vakio manokana ny Dan. 8:14,26,27.)
Misy antony maro mahatonga ny 70 herinandro ara-paminaniana ao amin'ny Dan. 9:24-27 ho ampahany amin'ny 2300 andro sy alina ara-paminaniana ao amin'ny Dan. 8:14. (1) Samy faminaniana ara-potoana izay maneho ny zavatra hitranga amin'ny hoavy ireo roa ireo. (2) Ny anjely Gabriela no nanazava ny hevitr'ireo faminaniana anankiroa ireo (vakio ny Dan. 8:16 sy Dan. 9:21). (3) Ny ampahany tokana amin'ilay faminaniana ao amin'ny Dan. 8 tsy voazavan'i Gabriela dia ilay faminaniana momba ny 2300 andro ao amin'ny Dan. 8:14. (4) Mirakitra ny fahitana sy ny ampaham-panazavana izany ny Dan. 8; ny Dan. 9 kosa dia tsy mirakitra afa-tsy fanazavana. Manazava ny ampahany izay tsy nohazavain'i Gabriela tao amin'ny Dan. 8 io Dan. 9 io, dia ilay faminaniana momba ny 2300 andro ao amin'ny Dan. 8:14. Io no ampahany tokana izay tsy azon'i Daniela (vakio ny Dan. 8:27). Manome fanampim-panazavana mba hahatakarantsika ny faminaniana ara-potoana ao amin'ny bokin'i Daniela ny bokin'i Ezra. Manampy antsika hahatakatra ny fiandohan'ny 2300 andro ara-paminaniana na 2300 taona ara-bakiteny teo amin'ny tantara tokoa mantsy io bokin'i Ezra io. Rehefa izay dia ho takatsika tsara kokoa ny asan'i Jesôsy ho antsika.
Ny olo-boafidin'Andriamanitra (Rom. 8:28,29)
Mino isika fa mifidy antsika noho ny antony manokana sy ho amin'ny asa manokana Andriamanitra. Kristianina maro no manana hevitra samy hafa momba ny hevitry ny hoe fifidianan'Andriamanitra olona. Inona no ambaran'ny Baiboly momba ny fifidianana antsika?
Vakio izay voalazan'ny Rôm. 8:28,29. Ho amin'inona no iantsoan'Andriamanitra antsika? Ho amin'inona no ifidianany antsika?
Ambaran'ireo andininy ireo mazava tsara fa notendren'Andriamanitra hitovy endrika amin'ny Zanany ny olombelona. Tsy midika anefa izany fa notendren'Andriamanitra na ho voavonjy na ho voaheloka isika, ka tsy manan-tsafidy isika ny amin'izany. Tsy izany velively fa manan-tsafidy malalaka isika. Raha ny marina, ny fifidianany antsika dia nokendrena mba hanova antsika, hanova ny fo sy saintsika. Tsy maintsy ovana isika mba haneho ny Zanak'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Koa mampanantena io fanovana io Andriamanitra eo amin'ny andininy manaraka (Rôm. 8:30). Ambaran'i Paoly ao fa izay antsoin'Andriamanitra no hamarininy (mahatonga antsika ho marina) sy omeny voninahitra (hamasininy). Koa tsy avela hanova samirery ny tenantsika isika, fa Andriamanitra mihitsy no mampanantena fa hanatanteraka io fanovana io noho ny heriny.
Vakio ny Rôm. 9. Inona no karazana fifidianana na fiantsoan'Andriamanitra voasoritsoritra ao amin'io toko io?
Milaza i Paoly ao amin'ny Rôm. 9 fa mifidy antsika ho amin'ny andraikitra manokana Andriamanitra. Nofidin'Andriamanitra ny Isiraelita mba hitondra ny vaovao mahafaly momba Azy amin'izao tontolo izao. Rehefa izay dia mahita teny tahaka izao isika: "araka ny voasoratra hoe: "Jakoba no tiako, fa Esao no halako" - Rôm. 9:13. Tsy takatry ny olona mazava tsara ny hevitr'io andininy io. Mihevitra izy ireo fa ny hevitr'izany dia hoe ny iray tamin'ireo mpirahalahy ireo ihany no tian'Andriamanitra. Raha jerena anefa ny tontolon-kevitr'io andalan-teny io, dia milaza i Paoly eto fa nifidy an'i Jakôba Andriamanitra fa tsy nifidy an'i Esao. Nofidin'Andriamanitra ho amin'inona moa i Jakôba? Nofidin'Andriamanitra izy mba ho rain'ny firenen'ny Isiraely. Koa misy karazam-pifidianana anankiroa ataon'Andriamanitra izany. Voalohany, mifidy ny tsirairay avy amintsika ho amin'ny famonjena Izy, ka maniry ny mba hiovantsika hitovy endrika amin'i Jesôsy. Faharoa, mifidy olona samihafa Andriamanitra mba hanao asa manokana ho Azy.
Nahoana no tokony hampahery anao ny fahafantarana fa notendrena ho amin'ny famonjena ianao? Etsy an-danin'izany anefa, nahoana ianao no afaka mifidy malalaka ny tsy handray ny fiainana mandrakizay atolotr'Andriamanitra?
Ny andraikitsika (Eks.3;4)
Marina fa miantso antsika Andriamanitra, saingy mbola manana safidy malalaka ny hanaiky na handa izany antso izany isika, tahaka ny ananantsika safidy malalaka ny hanaiky na handa ny famonjena atolony antsika rehetra. Mety hametraka antsika eo amin'ny andraikitra manokana Izy, saingy afaka mifidy ny tsy hanatanteraka izany asa izany isika. Tena maniry ny anaovantsika zavatra manokana ho Azy tokoa Andriamanitra, tahaka ny iantsoany antsika mba ho tonga tahaka an'i Jesosy. Ampahany amin'ny drafi-pamonjeny antsika ny fifidianany antsika ho amin'ny andraikitra manokana. Amin'ny fanatanterahana izay asainy ataontsika no anehoantsika eo amin'ny fiainana fa tena zava-misy tokoa ny famonjena atolony antsika.
Nomen'Andriamanitra ny andraikitra arnin'ny maha-mpanjakan'ny Isiraely i Saoly. Mampalahelo anefa fa tsy nanolotra tamin'ny fahafenoany ny fony ho an'Andriamanitra mihitsy izy, na dia teo aza ny andraikitra nomena azy. Tena miantso olona mba hanao asa manokana ho Azy tokoa Andriamanitra. Tsy midika anefa izany fa hankato Azy izany olona izany. Noforonin'Andriamanitra hanana safidy malalaka isika, saingy raha tsy manaraka ny fitarihany isika dia mety ho verintsika ny zavatra rehetra.
Vakio ny Eks. 3 sy 4. Inona no ampianarin'ireo toko ireo antsika momba ny zavatra mitranga rehefa miantso olona iray ho amin'ny andraikitra iray manokana Andriamanitra?
Ny valintenintsika dia mety ho tahaka ny an'i Ezra sy i Nehemia, izay nandeha tsy nisy fisalasalana, na tahaka ny an'i Mosesy, izay nanana fandavana sy fialan-tsiny betsaka. Nandeha ihany i Mosesy nony farany, saingy niezaka ny hiala izany aloha izy tamin'ny voalohany. Nolaviny ny antson'Andriamanitra tamin'ny filazany fa tsy tsara noho ny hafa izy, tsinontsinona, ary tsy nanana toerana ambony. Koa ahoana moa no mety hihainoan'i Farao azy? Ankoatra izay, nitaraina izy fa tsy manana fahaizana manokana: "Tompo ô, mifona aminao aho, olona tsy mahay mandaha-teny aho, na hatrany aloha, na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao izao aza; fa votsa vava sy miadam-piteny aho" - Eks. 4:10. Farany, nasainy naniraka olon-kafa Andriamanitra. Rehefa mamaky ny tantaran'i Mosesy anefa isika, dia hitantsika fa lasa mpitarika nanan-kery lehibe izy, na dia nanan-kilema aza. Nanjary olona izay nanatanteraka tamim-pahatokiana ny andraikitra nasain'Andriamanitra ataony izy.
Inona no fialan-tsiny ataontsika matetika mba tsy hanaovana ny zavatra efa fantatsika fa tian'Andriamanitra hataontsika?
Vakio tsara ny MM, tt. 566-568, izay miresaka momba ireo fitopolo herinandro ara-paminaniana sy ny fahatanterahany teo amin'ny tantara. "Ny fotoana iavian'i Kristy, ny anosorana Azy amin'ny Fanahy Masina, ny ahafatesany ary ny anomezana ny filazantsara amin'ny jentilisa, dia samy voatondro mazava. Tombon-tsoan'ny vahoaka jiosy ny mahazo ireo faminaniana ireo, ary ny mahafantatra ny fahatanterahan'ny asa nanirahana an'i Jesosy. Namporisika ny mpianany Kristy ny amin'ny ma ha-za va-dehibe ny fandinihana ny faminaniana. Raha niteny momba ny faminaniana nomena an'i Daniela mikasika ny andron'izy ireo Izy, dia hoy Izy hoe: `aoka hisaina izay marnaky izany' - Mat. 24:15. Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nohazavainy tamin'ny mpianany `ny mpaminany rehetra, sy 'ny hevitry ny teny rnilaza Azy' - Lio. 24:27. Efa niteny tarnin'ny alalan'ny mpaminany rehetra ny Mpamonjy. Ny Fanahin'i Kristy tao Aminy' no `nanambara ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany' - 1 Pet. 1:11" - IFM, t. 234.
1. Diniho misimisy kokoa ity hevitra ity: miantso anao Andriamanitra mba hanao izay zavatra tianao atao. Inona ny sasany amin'ireo fitsipika azonao arahina mba hahafantarana fa manao ny sitrapon'Andriannanitra ianao, tsy amin-javatra tianao atao ihany, fa amin-javatra ankapobeny?
2. Vakio ny tantaran'i Jona. Ahoana no namaliany ny antson'Andriamanitra ho an' ny fiainany? Inona no lesona azontsika raisina avy amin'ny fanandramany? Jereo indray ny ohatra nasehon'i Paoly. Inona no nataony rehefa nantsoin'ny Tompo izy mba hanompo Azy (vakio ny Asa. 9:1-20)? Ampitahao ny fanandraman'i Rim!! sy Paoly. Inona ireo fahasamihafana goavana nisy teo amin'izy ireo?
3. "Ny tantaran'i Jodasy dia mampiseho ny fiafarana mampalahelon'ny flainana izay tsy nety nanome voninahitra an'Andriamanitra. Raha maty talohan'llay dia farany nankany Jerosalema i Jodasy, dia ho noheverina ho olona mendriky ny toerany teo amin'izy roa ambin'ny folo lahy izy, ka ho nampalahelo tokoa ny tsy maha-eo azy." IFM, t. 767. Eritrereto ny tantaran'i Jodasy Iskariota. Nantsoin'Andriamanitra mba hamadika an'i Jesosy ve izy? Raha izany, ho rariny veny fahitan'i Jodasy izany? Nomen'Andriamanitra tombony fanararaotra maro mba hanaovana ny marina izy, saingy nanao safidy ratsy ihany tamin'ny farany. Inona no ampianarin'io tantara io antsika momba ny herin'ny safidy malalaka eo amin'ny fiainantsika?